Ntuzi Echiche Ụdị Ntuzi Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Enweghị ike ikwubiga okwu ókè banyere ịma mma nke ntanba nru ububa. Ngwurugwu na-ahụ n'anya onye ọ bụla na-aghọta ọdịdị. Ndị inyom na-abụkarị ndị anyị na-ahụ ndị nwere nkwụnye ahụ n'ahụ ha dị ka egbu. Ụdị na agba nke butterflies bụ ihe na-eme ha zuru oke maka ọrụ nkà. Enweghi akụkụ nke ahụ nke nru ububa enweghi ike igosi.
Ị gafeela ihe isi ike ma ọ bụ ihe ịma aka na ndụ ma nata ha? Iji butterflies dị ka egbu egbu nwere ike inyere gị aka icheta.
Agụmakwụkwọ na-ekwu banyere ime mmụọ na ịhụnanya. Ọ nwere ike ịkọwa uche na ịhụnanya, ọchịchọ na ịhụnanya. Ntughari uzo mara nma ma mara mma nke bu ihe mere umuaka choro ichota ha. Ịdị mma na mpako ọ na-apụta mgbe ọ nabatara dị ịtụnanya. Ọ bụ ọrụ nke onye na-eme ka ị mara ebe a ga-etinye #tattoo.
1. Ankle okooko osisi na nru ububa ezigbo egbu egbu maka ụmụ agbọghọ
A na-agwa akụkọ kachasị egwu na ịbịaru butterflies. Ụmụ nwanyị ndị lanarịrị ọrịa ara ure na-ahụ taa, na-eji butterflies na-ekpuchi scars n'akụkụ akụkụ ahụ. isi iyi
2. Pyramid na nru ububa azụ onk egbu egbu maka ụmụ agbọghọ
Ọnụ nru ububa gị ga-adabere na ebe ịchọrọ ịhapụ ya na ahụ gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe dị ukwuu karị, apata ụkwụ, ụbụrụ ma ọ bụ azụ nwere ike ịbụ ebe zuru oke maka nke ahụ. isi iyi
3. Egwuregwu egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ nke ụmụ nwanyị na azụ
Onye na-ese ihe ga-enyere gị aka ijikọta usoro ịhọrọ oke egbugbere ọnụ na-egbu egbu maka onwe gị ma ọ bụrụ na ị ka ga-ekpebi. isi iyi
4. Ụdị ntule egbuke egbuke na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma
A na-eji ihe nkwụsị, ahụmahụ na mgbu jọgburu onwe ya dochie ya na butterflies nke a maara dị ka ndị e kere eke mara mma. Ị bụ nwanyị nke na-agbalị igosi gị nwanyị nwanyị? isi iyi
5. Ngwurugwu dị nfe na-egbu egbu egbu egbu maka ụmụ nwanyị
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ bọlọba, ị nwere ike ime ka ha bụrụ oke nwoke ma ọ bụrụ na ị gaghị efunahụ ịma mma nke na-abịa na nsị anụ. isi iyi
6. Ụdị nru ububa egbuke egbuke echiche
Gaa maka egbu egbu egbu egbu. Ị nwere ike ịbụ nwoke na-ahụ ọdịdị n'anya n'anya ma nwee ọnya iji zoo; butterflies nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma maka gị. isi iyi
7. Kọmputa na nru ububa egbuke egbuke maka umu nwanyi n'azụ
I nwere ike itinye ntụrụndụ na ntanaka nrube ama site n'inwe ha gburugburu okooko osisi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke nwere mmasị n'ebe ị nọ. isi iyi
8. Music ederede na nru ububa azụ tattoo echiche maka ụmụ nwanyị na ozi; kwere
Na njedebe nke ụbọchị, ị na-enwe obi ụtọ na ị nwetara ihe ndị a mara mma na-ele anya n'ahụ gị. Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ butterflies dị ka ịchọrọ ọbụna na okwu mara mma edere na ha. isi iyi
9. Ebube egbuke egbuke egbuke egbuke echiche maka ndi mmadu ndi ozo
Azụ nku butterflies nwere àgwà mara mma. A maara nku ndị a iji gosi ịdị nro na ịdị nwayọọ mgbe oké ifufe gasịrị; ma na-egosi ike iji merie nsogbu. isi iyi
10. Utu na nru ububa egbu egbu onk echiche
E nwere ụdị butterflies dị iche iche ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ị dị njikere maka egbu egbu ahụ. isi iyi
11. obere afo echiche egbugbu butterflies maka ụmụ nwanyị
Ụbụrụ na-egbu egbu na-adọrọ mmasị nke ọma na ị nwere ike ịme ka ụfọdụ n'ime akụkụ ahụ dị nro nke ahụ gị na-echebara ha echiche. isi iyi
12. Blue agba nru ububa egbu egbu onk echiche na azụ
Jikọọ ya na ihe dị iche iche nke okike na egbu egbu a mara mma. Ị nwere ike ịhapụ egbugbu na akụkụ ọ bụla nke ahụ na nkà ga ka dị ịtụnanya. isi iyi
Pịa ebe a maka ndị ọzọ na-egbu egbu egbu egbu
ụkwụ akaEgwu ugokoi ika tattooAnkle Tattoosaka mma akaegbu egbu hennaegbu egbundị mmụọ ozina-adọ aka mmamma tattoosegbu egbu ebighi ebiegbu egbu diamondna-egbu egbuakara ntụpọaka akaenyí egbu egbuegwu egwuudara okooko osisiegbugbu egbugbuegbu egbu maka ụmụ nwoken'olu oluegbu egbu egbuima ima mmandị na-egbuke egbukezodiac akara akaradi na nwunyeaka akaegbu egbu osisi lotusegbugbu maka ụmụ agbọghọọnwa tattoosechiche egbugbuegbu egbu mmirienyi kacha mma enyinnụnụọdụm ọdụmakpị akpịngwusi pusiụmụnne mgbuakwara obiỤdị ekpomkpaegbu egbu okpuGeometric Tattoosmehndi imeweazụ azụokpueze okpuezearịlịka arịlịkaNtuba ntughariagbụrụ eborip tattoosUche obi